Lammii Iraan 'shiftoota' galanaarraa Somaaleetiin waggaa afuriif uggurame ture gadhiifame - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Mohaammad Shariif bara 2015 keessa qabaman
Namni lammummaan isaa Iraan ta'eefi imala galaanarraan beekamaa ta'e erga waggoota afuriif 'shiftoota' galaanarraa Somaaleetiin ugguramee ture bilisa ba'e jedhan.
Imalaan maqaan isaa Mohaammad Shariif Panahandeh jedhamu kun "baayyee dhukkubsataa jira". Yaalii jaarsummaa gargaarsa namoomaa dhaabbata Hostage Support Partnership (HSP) jedhamuun gadhiifamuu danda'eera.
Waggoota kurnan darban keessa, namoonni hedduun qarqara Somaaliyaatti qabamanii booda erga maallaqa hanga gaafataman kaffalanii booda gadhiifamaniiru.
Lammileen Tarkii Naayijeeriyaatti butamanii turan gadhiifaman
Obbo Shariif amma yeroo gadhiifaman 'shiftoota' galaanarraa namoonni ugguramanii jiran sadiitti galaniiru.
Saamichaafi uggurri galaanarraa naannichatti bara 2011 keessa kan hedduu ol-ka'ee ture yommuu ta'u, bara dhiyoo asitti ammoo baayyee kan xiqqaataa dhufe ta'uu Humni Galaanaa Awurooppaa naannoo sanarra hojjetu ni hima.
Namoonni sadan ammalleee ugguramanii jiran lammii Iraan yommuu ta'an Obbo Shariif waliin turan kan Bitootessa 2015 keessa bidiruu ittiin qurxummii qaban keessaa kan butaman, jechuun HSP BBC'tti himeera.
"[Obbo Shariif] hanqina nyaataan hedduu miidhameera. Ulfaatinsi isaa baayyee kan gadi bu'eefi dhibee garaachaallee horatee garaan isaa keessi dhiigaa jira, jechuun AFP'n Obbo Steed eeruun gabaaseera.
Imalaan galaanarraa lammii Iraan bilisa ba'e kun wallaansaaf gara magaalaa guddittii Itoophiyaa, Finfinneetti geeffameera. Isaan boodas gara biyya isaatti akka geeffamu himameera.
Goodayyaa suuraa Danaa Itoophiyaafi Somaalee agarsiisu
Akka Reuters gabaasetti, Iraan gama isheetiin gargaarsa lammii ishee kanaaf HSP, UN, Puuntilaand Somaaleefi Itoophiyaan taasisaniif galateeffatteetti.
Obbo Shariif sababii rakkoo fayyaasaatiif gadhiifame, warreen hafan sadaniif garuu 'shiftoonni' kunneen maallaqa guddaa itti fudhachuu barbaadu jedhan Obbo Steed yeroo AFP'tti himan.
Saamtonni Naayijeeriyaa namoota dooniin ilmalan butan
Lammileen Tarkii Naayijeeriyaa kutaa biyyaa Kiwaaraa keessatti butamanii turan gadhiifaman
Pirezidaantiin Keeniyaa eegdota galaanarraa yeroo jalqabaaf hojii eegalsiisan.